Liza Knotko's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Liza Knotko
Liza Knotko ndiye Сontent Kushambadzira Manager pa SplitMetrics, chishandiso chekuyedza A / B yekushandisa chinotendwa naRovio, MSQRD, Prisma naZeptolab. SplitMetrics inobatsira nharembozha vanogadzira hodhi yekushandisa chitoro optimization nekumhanyisa A / B kuyedza uye kuongorora mhedzisiro.
Maitiro ekuPolish Mobile App Chengetedza Chigadzirwa Mapeji mune Pre-kutanga
NeChishanu, Nyamavhuvhu 4, 2017 China, August 3, 2017 Liza Knotko
Pre-yekutanga chikamu ndechimwe chenguva dzakakomba kwazvo muhupenyu hweapp. Vaparidzi vanofanirwa kubata nemakumi ezviuru emabasa anoisa yavo nguva yekugadzirisa uye hunyanzvi hwekumisikidza hunyanzvi kuyedza. Nekudaro, ruzhinji rwevashambadziri veapp vanokundikana kuona kuti hunyanzvi hwekuyedza A / B kunogona kutsvedza zvinhu kwavari uye kubatsira mumabasa akasiyana-siyana ekutanga. Kune nzira dzakawanda vaparidzi dzavanogona kuisa A / B kuyedza mukushandisa pamberi peapp yekutanga